Video Torrent Goobaha iyo Video Torrent Players
Goobaha Video torrent iyo ciyaartoyda video torrent
Goobaha torrent Video yihiin kuwa nooc oo ah website-yada oo laguu suurogeliyo in aad kala soo bixi videos sida dokumantaaryada, wareysiyo iyo filimaan ku saabsan qalab aad lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Waxaa jira badan oo goobaha video torrent kaa caawin kara in aad hesho wax kasta oo video aad rabto inaad aragto laakiin si aad tixraac iyo caawinaad, waxa soo socda waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah 5 goobood oo kale hogaanka:
Top goobaha torrent 5 video
Top ciyaartoyda 5 video torrent
Qeybta 1: Top goobaha torrent 5 video
1. Kickass daadkii-Kickass daadkii waa number 1 goobaha video torrent adduunka oo ah mid ka mid madal kaas oo awood kuu soo bixi links file ururinta badan oo videos oo dunida ku baahsan. Laga soo bilaabo dokumantaaryada muujinaya TV iyo filimada in ay ku noolaadaan show videos, wax kasta oo video aad ka xusuusan karto, Kickass Torrent kuu soo bixin doonaa. Website waxay bixisaa dajinta lacag la'aan ah iyo kaalinta sida tirada 1 torrent goobta dajinta ee adduunka.
2. Torrentz-Torrentz weli waa madal kale oo caan ah kuwaas oo awood u isticmaala inay files video torrent ee lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo hab si cadaalad ah oo fudud. Waxaa jira search engine bixiyey goobta aad dhex nooca karo raadi video ah in aad rabto in aad daawato ah. Ka sokow taas, waxa kale oo aad samayn kartaa xulashada ka qaybood ama liiska bixiyey goobta.
3. Extratorrent-haddii aad tahay qof gebi iyo daqar ha daawan doono oo dhan cayn kasta oo videos, ka dibna goobta kale oo caddayn karaan waxtar aad u waa Extratorrent. Boggan waxa aad ka bixisaa badan oo xul ah videos oo u fududaynaysa in aad u soo dejisan. Interface waa nadiif ah iyo helitaanka video waa mid aad u fudud.
4. Pirate Bay-tani waa mid ka mid ah goobaha torrent ugu da'da weyn oo ugu kalsoon tahay in dunida oo dhan. Waxay bixisaa oo isku jira oo ballaadhan oo ay ka mid yihiin videos muujinaya TV, filimada, odayo iyo kuwo kale oo badan. Si fudud waxaad ka heli kartaa video aad dooneyso in aad kala soo bixi by magaceeda qortid sanduuqa raadinta siiyay bogga guriga ee goobta ka. Videos sokow, waxa kale oo aad ka heli kartaa daadkii kale oo badan oo ay ka mid yihiin muusiga, ciyaaraha iyo kuwo kale oo badan. Goobta waa laga heli karaa qaab nuqulo iyo clones.
5. Izohunt.to-tani waa boosteejo ah kaas oo la bilaabay ka dib markii Isohunt.com waxaa lagu xidho oo mar kale waa boosteejo ah oo laga helaa kumanaan iyo kumanaan daadkii video aad u dejisan. Website-kani waa amaan iyo nabad fayraska cudurka tirada link hooseeyo madal iyo aad ayey u fududahay in la isticmaalo.
Qeybta 2: Top ciyaartoyda 5 video torrent
Hadda oo aad ogtahay in goobaha ugu wanaagsan si ay u soo bixi files torrent, tallaabada xigta oo imanaya si ay u daawadaan videos bixi. Waxaad u baahan tahay in ay torrent video wanaagsan ah ciyaaryahan ku saabsan habka ay u awoodaan inay ku raaxaystaan ​​videos ah. Waxaa jira fursado badan oo wanaagsan ciyaartoyda video torrent iyo waxa ay noqon karaan kuwo lagu wareero in ay doortaan mid ka mid ah ugu wanaagsan. Tani waa sababta aan u soo bixiyey in aad liiska ugu sareeya 5 ciyaartoy video torrent oo la siiyey sida soo socota:
1. VLC-mid ka mid ah video ah ciyaaryahan ugu wanaagsan iyo universal ama ciyaaryahan torrent kaas oo aad ku raaxaysan karaan nooc kasta oo video files waa VLC. Madal Tani waa sidaas oo caan ah in maalmahan, ay timaado rakibay nidaam aad. Waa il furan, iskutallaabtiisana madal iyo aadka u qaadi karo ciyaaryahan warbaahinta xorta ah. Waxaad ku soo bixi kartaa adiga oo isticmaalaya warbaahinta website a dajinta wanaagsan. http://www.videolan.org/vlc/index.html
2. KM player- tani waa video ah miisaanka yar oo ciyaaryahan audio oo u ciyaara aad torrent video files in tayada ugu fiican. Waxaa iminka, fududahay in la isticmaalo iyo yimaado kontaroolka iyo fursado badan si aad video daawashada waayo-aragnimo farxad. Sidoo kale, waa mid aad u customizable taas oo macnaheedu yahay in aad qabsato karaa si kastaba ha ahaatee aad rabtid in aad. http://www.kmplayer.com/
3. Wondershare ciyaaryahan kale madal cajiib ah kaas oo aad ku raaxaysan karaan videos aad dooratay oo ay ku jiraan filimada, bandhigyada TV iyo dokumantaaryada iwm waa ciyaaryahan Wondershare. Tani waa ciyaaryahan awood badan warbaahinta kaas oo ka ciyaari kara ku dhowaad qaab of videos iyo sidoo kale u ciyaara Cajalado ee ugu tayada sarreeya ee suuragalka ah. Waxay leedahay design ah dareen iyo HD tayada audio wanaagsan. http://www.wondershare.com/video-player
4. Monavi Video Converter-tani waa ciyaaryahan wejiyo torrent kaas oo sidoo kale awood u aad si loogu badalo videos in qaabab habboon ka dib markii ay ku soo bixi dhex torrent. Waxaad isku dayi kartaa version tijaabo oo lacag la'aan ah kharashka ka hor soo degsado version ku bixisay. Ciyaaryahanka Tani xaqiiqdii waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican halkaas. http://www.movavi.com/videoconverter/
5. Wondershare video Converter kama dambaysta ah, taasu waa ciyaaryahan video oo aan taageerayn uun cayn kasta oo torrent video files laakiin sidoo kale iyaga u ciyaaro ee nooc kasta oo nidaamyada hawlgalka oo ay ku jiraan Mac OS. Waxaad isticmaali kartaa sidoo kale ciyaaryahan warbaahinta si loogu badalo qaabab video si ay loo gudbin karaa qalabka kale ee la daawado fudud oo aan xuduud lahayn. http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html
> Resource > Music > Players Video Torrent Goobaha iyo Video Torrent